Dil Ka Dhacay Degmada Afgooye Iyo Howlgal La Fuliyay | wardeeqnews News Online News http://wardeeqnews.com/
Dil Ka Dhacay Degmada Afgooye Iyo Howlgal La Fuliyay
Kooxo ku hubeysnaa Bastoolado ayaa xalay gudaha Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hooe waxaa ay ku dileen Wiil dhalinyarao ah la sheegay inuu ahaa shacab ah, iyadoo ay kasoo baxayaan faah faahino.
Dad goobjoogayaal ah oo la hadlay Idaacadda Dalsan ayaa waxaa ay u sheegeen in dilkaas uu ka dhacay Xaafadda Xaawo-taako ee Afgooye, waxaana wiilka dhalinyarada uu u geeriyooday rasaas badan oo lagu dhuftay.
Intaas kadib ragii fuliyay dilka ayaa goobta si deg deg ah ugu baxsaday luuq yar oo halkaas ku yaalla, isla markaana waxaa sida caadada aheyd daqiiqado kadib goobta tegay Ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Afgooye, iyagoona qaaday Meydka.
Sidoo kale Ciidamada ayaa howlgal baaritaano ah ka sameeyay Xaafadda Xaawo-taako iyo goobo kale, waxaana howlgalka inta uu socday lagu soo qabtay dad dhowr ah oo u badnaa dhalinyaro, kuwaasi oo laga shakisan yahay.
Weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Saraakiisha Ciidanka dowladda iyo kuwa Degmada Afgooye oo ay uga hadlayaan howlgalka ka dhacay halkaas, isla markaana lagu soo qabtay dad kala duwan oo lagu wado baaritaano.